Vamwari vatatu vakuru vechiHindu | Absolut Kufamba
El ChiHindu Icho chimwe chezvitendero zvekare kwazvo pasi rose, zvinoitwa nevanhu vanopfuura mamirioni zana nemazana zana mukondinendi yeAsia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Vhura India, Pakistan, Nepal, Bangladesh neMalaysia kune vazhinji vanotevera zviga zvavo nekunamata vanamwari vatatu vakuru vechiHindu.
Kusiyana nezvimwe zvitendero, vanamwari ava vanonamatwa muhupenyu hwezuva nezuva. Kupfuura zvisingabvumike uye zvisikwa zviri kure, zvinoonekwa sezvimiro izvo zviri chikamu chechokwadi chezuva nezuva. Kune akawanda mafungu uye zvikoro mukati meHinduism.
Mukati memarudzi akasiyana echiHindu, havazi vese vamwari vari muchikamu chimwe chete. Kune vasiri pasi pemamirioni makumi matatu evamwari, asi havazi vese vakakosha zvakaenzana uye vanokudzwa.
Ava ndivo vatatu vanamwari vakuru vechiHindu: Brahma, Vishnu naShiva. Ivo vanoumba iyo Trimurti ("Mafomu matatu" muSanskrit) uye anomiririra zvakateedzana masekonzi ezvisikwa, kuchengetedza uye kuparadza kwepasirese.
Zvinoenderana netsika yechitendero chechiHindu, Brahma Ndiye iye mwari musiki weChadenga. Zvese zviriko munyika ndezvekuita kwake. Iyo inomiririra huchenjeri nehungwaru.
Brahma ane vakadzi vaviri: Saraswati, mwarikadzi wezivo, uye Savitri, anova mwanasikana wamwari wezuva. Dharma (musiki mwari wechitendero) uye we Attri. Uye zvakare, ndiye baba vevanakomana gumi nemwanasikana kwakabva madzinza akasiyana evanhu.
Maererano netsika, kwaanogara kuri Brahmapura, guta reumwari riri pamusoro pe Gomo reMeru, iyo kune rumwe rutivi inoonekwa senzvimbo yepasi.
Mumiririri weBrahma, iye mwari mwari weZvese ZvechiHindu
La iconic inomiririra Brahma Icho chechembere ine ganda dzvuku ine misoro mina yendebvu. Idzi ndebvu chena dzinomiririra huchenjeri. Mumwe neumwe wemiromo yawo mina uri kuverenga imwe yeVedas ina kana zvinyorwa zvitsvene. Iye zvakare ane maoko mana ane maoko akabata zvakasiyana zvinhu:
Mudziyo wemvura, tsime rehupenyu.
Tambo yemabhero (yapa mala) kuverenga zera reZvose.
Chinyorwa kubva kuVedas.
Brahma inowanikwa mune dzakawanda zvivezwa uye pendi kumusana kwe hanzi huru inonzi Jansa, shiri yeumwari iyo inokutendera iwe kuti ufambe kureba uye hupamhi hweChadenga.
Sechido chekuziva, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Brahma iri zvakare rakakurumbira bheriya bhiya muIndia. Vanhu vazhinji vanonwa pasina izvi sekufungidzirwa sehusimbe.
Kana Brahma ari iye mwari musiki, chiHindu chinofunga Vishnu samwari anochengetedza. Iye ndiye muchengeti wehurongwa, rugare uye rudo muChadenga. Ndiye umwari hune simba huzere nekunaka, anokwanisa kuita zvishamiso zvisingafungidzike uye kuva anorwa zvakanyanya uye ane hutsinye nemadhimoni nevanhu vakaipa.
Maererano netsika, imba yaVishnu iri munzvimbo inonzi Vaikhunta, iri kumusoro kumusoro kwedenga kupfuura Himalaya. Iyo Ganges, rwizi rukuru rwutsvene rweIndia, runokwira kubva patsoka dzake. Vishnu akaroora Lakshmi, mwarikadzi worunako nepfuma.
Iwo chaiwo mamiririro aVishnu ndeaya ekuvapo kwechimiro chevanhu, yebhuruu dehwe nemaoko mana. Pachipfuva chake pane bvudzi rebvudzi jena. SaBrahma, iye zvakare ane hunhu huna hwaakabata mune rimwe ramaoko ake mana:
Conch shell (shanká) iyo yakamboridzwa mushure mekukunda kwemauto.
Iyo mallet yegoridhe iyo Vishnu inopwanya nayo misoro yemadhimoni.
Ringi yakapinza yesimbi (Sudarshana chakra) yaanoshandisa kuuraya madhimoni.
Vishnu anowanzoonekwa achigara pane hombe lotus ruva uye achiperekedzwa naLaksmi, akarara pamakumbo ake.
Nhengo yechitatu yeTrimurti ndeye Shiva, mwari wekuparadza. Ipo Vishnu achimiririra kutanga kwehupenyu, Shiva anomiririra kupera. Basa rayo rakakosha mukati mechiHindu, uko kufa kunokosha kutanga kuti kusimuka kuvepo. Ndokusaka iye asingafanire kutorwa samwari akaipa, zvinopesana.
Mamwe mazita ake emadunhurirwa ndiwo "anotyisa" kana "mupi wemufaro." Ndiyewo mwari wekutamba, saka mimhanzi nekutamba zvine kukosha kukuru mumhemberero uye tsika dzakakomberedza chimiro chake.
Mukadzi waShiva ndiye mwarikadzi Parvati, waakabereka naye vana vatatu: Aiapa, Ghanesa uye Kartikeia, Mwari wehondo. Nzvimbo yekugara yeShiva iri mu Gomo kailash, parizvino iri munharaunda yeChinese.
Giant Shiva chifananidzo mutemberi yechiHindu
Mufananidzo wekare weShiva ndewe yogi ane ganda-rebhuruu uyo ​​dzimwe nguva anoratidzwa achigara munzvimbo yekufungisisa uye dzimwe nguva semutambi aine rimwe remakumbo ake mumhepo. Akatenderedza mutsipa wake a nyoka iyo inomiririra iro rakakosha simba.
Izvo zvine maziso matatu, imwe yacho iri pahuma. Iri ziso rechitatu rinomiririra ndege yemweya, kunyange hazvo maererano nedzimwe tsika iwo maziso matatu anomiririra zvikamu zvitatu zvenguva: yapfuura, yazvino neyamangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Vanamwari vatatu vakuru vechiHindu